Ukuhamba kunye nezoKhenketho ziye zancipha nge-17.4% ngo-Agasti 2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Ukuhamba kunye nezoKhenketho ziye zancipha nge-17.4% ngo-Agasti 2021
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Umsebenzi wentengiselwano othobekileyo unokubangelwa kukuthothisa iimvakalelo zokwenza isivumelwano njengokungaqiniseki ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
Izivumelwano ezingama-57 zecandelo lezohambo nezokhenketho zabhengezwa ngo-Agasti 2021.
Inani leentengiselwano ezibhengeziweyo zibonise ukwehla nge-17.4% ukusuka ngoJulayi 2021.
Nge-Agasti kubhalwe inyanga yesibini elandelelanayo yokwehla komsebenzi wentengiselwano.
Itotali yeekhontrakthi ezingama-57 (ezibandakanya ukudityaniswa kunye nokufunyanwa [M & A], ukulingana kwabucala, kunye nenkxaso mali) ziye zabhengezwa kwicandelo lokuhamba nokhenketho kwihlabathi ngo-Agasti 2021, oko kwehla nge-17.4% ngaphezulu kwe-69 yezivumelwano ezabhengezwa ngoJulayi, ngokwe idatha zeshishini kunye neengcali zohlalutyo.
U-Agasti uphawula inyanga yesibini elandelelanayo yokwehla kwemicimbi yecandelo lezokhenketho emva kokonyuka ngoJuni. Umsebenzi wentengiselwano othobekileyo unokubangelwa kukuthothisa iimvakalelo zokwenza isivumelwano njengokungaqiniseki ngenxa yobhubhane we-COVID-19 osandayo.
Zonke iintlobo zentengiselwano (phantsi kwengxelo) zikwangqinile ukwehla kwemicimbi yesivumelwano ngo-Agasti xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo. Isibhengezo senkxaso mali, ukulingana kwabucala kunye nokudityaniswa kunye neekhontrakthi zokufunyanwa kwehle nge-4.3%, 20% kunye ne-24.4% ngo-Agasti xa kuthelekiswa nenyanga edlulileyo, ngokwahlukeneyo.
Umsebenzi wentsebenzo nawo wehlile kwiimarike eziphambili ezinje nge i-USA, i UK, I-Indiya ne-Australia ngo-Agasti xa kuthelekiswa nenyanga ephelileyo, ngelixa i-China ibone ukuphucuka kwimicimbi yesivumelwano.
IiMfuno eziTsha zesitofu saseKhanada
Ikhonkco elitsha lifunyenwe phakathi kwe-Alzheimer's kunye ...
IBhunga leSigqeba se-UNWTO Licacisa: Ileta entsha...
UStephen Asiimwe uzakukhokela iCandelo lezoKhenketho laBucala laseUganda Novemba 28, 2021
Ibhodi yabaLawuli ye-Uganda Private Sector Foundation ibhengeza ukuqeshwa kukaMnu. Stephen Asiimwe, njengoMlawuli wayo omtsha weSigqeba. Ungena ezihlangwini zongasekhoyo uMnu Gideon Badagawa obhubhe kweyeSilimela kulo nyaka.